I-Hong Kong I-Rugby Sevens 2017-I-Guide Essential
EAsia Ehong Kong
Isikhokelo esibalulekileyo kwi-Rugby Sevens yeHong Kong
I-Hong Kong I-Rugby Sevens ingaphezulu kweyona mcimbi mdlalo wezemidlalo omkhulu we-Asia, ukufika konyaka komqhubi ukuya kwiidolophu eziqhelekileyo kwimibhiyozo yomzi, kwiindawo ezikufuphi eHong Kong kufuneka zenze i-mardi gras. Ngaphakathi kwebala lemidlalo, abalandeli bembatha, baphuze, kwaye, ukuba kukho ixesha, jonga enye yeyona midlalo yebhola yombhoxo. Ngaphandle, ii-pubs, iindawo zokutya kunye neevenkile zinika i-Hong Kong iRobby Sevens ekhethekileyo ukunyanzela kumawaka abalandeli abangenakuncipha ngaphakathi kwinqanaba.
Yintoni: I- Tournament yaseKong Rugby Sevens
Ngo: 7-9 ngo-Epreli 2017
Kuphi: eHong Kong Stadium, eCauseway Bay
Iikitikiti: Iikitikiti zi-HK $ 1,500 kwiintsuku ezi-3 kodwa zigqitywe ngokugqithiseleyo. Khangela apho sithenga khona ithikithi ye-Hong Kong Sevens inkcazelo ngolwazi olungaphezulu.
Iingqungquthela zi-cuts down, i-speed up version yombhoxo wendabuko. Ukukhawuleza ngokukhawuleza, amanqaku aphakamileyo kunye nemithetho engaphantsi, i-Sevens inekhenketho esikhulu kunazo zonke kuneenguqulelo zangaphambili zamahlanu. I-Hong Kong i-Rugby Sevens ngumcimbi osisigxina kumqhudelwano we-Sevens ogqithisayo ojikelezayo kwihlabathi, kunye neenqwanqwa ezigqwesileyo zigqibile kwiimpembelelo ezifunyenwe kuzo zonke i-tournaments.
Umdlalo we-Sevens udla ukusetyenziswa njengendawo yokuqeqesha abadlali ukuba bazibonakalise, ngaphambi kokufudukela kumahlanu. Abadlali ababini bezona zibalaseleyo zokuba babenomdla kwi-tournament yaseHong Kong benguJon Lomu noDavid Campese, ababethe kakuhle umdlalo wabo kwiminyaka emininzi ye-Sevens ', ngaphambi kokuqhubeka nokulawula i-rugby yomhlaba.
Ngaba ndifuna ukuba ngumqhubi wombhoxo?
Nangona umbhoxo ongekho ngokuqinisekileyo ngowokuqala, ininzi yesihlwele iphendukela kwi-booze kunye nemoya kwaye kungabi yombhoxo. Umdlalo womdlalo wokuzila ngokukhawuleza novuthayo osixhenxe uhlala phantsi kwemizuzu elishumi elinesihlanu nanini, kwaye ixesha elininzi kwibala lemidlalo lizinikele ekungeneni kwimimoya yomkhosi.
Nangona awukho umqhubi wombhoxo, ukuhanjelwa kusasazwa kakhulu.
Ndingafumana phi i-bests ye-Sevens?
Ummiselo waseMzantsi South uhlala ekhaya kubaxhasayo abaninzi kunye nokucula, ukumemeza kunye namaza aseMexico agxothwa yiSouth Stand crowd. Abaxhasayo beSouth Stand nabo badonsa ngokwabo, banikela iingubo ezivela kubasemagodini abaxhambileyo, kuba bavuyisa amaqela kunye. Ukuba ngaba iqela lingenzi ukubonakala, uya kukhuthazwa ukuba ukhethe ilizwe elimkelweyo kwaye uyamemeza ukuya ekugqibeleni. U lumkiso; iSouth Stand nayo yikomkhulu leethenketenti abaninzi baninzi abaphuzayo, kwaye ngelixa lilungelelanisa, i-atmosphere ingaba yinto encinci kakhulu kwabanye.
Ngokukhawuleza ngaphandle kwebala le midlalo yombhoxo, apho unokuyonwabela khona isikrini esikhulu ngaphakathi kwintlalo yebala. I-pub ye-Wan Chai kunye nemivalo iya kupakishwa ngexesha lomncintiswano kwaye iya kuba nomdlalo wombhoxo kwimidlalo e-7 yemidlalo yeTV, kunye nemiklomelo, imidlalo kunye nemigangatho yexabiso elimisiweyo.
Fumana okunye malunga nendawo yokubukela, udle uphinde uphuze kwisikhokelo sethu sohambo lwe-rugby ,
Yintoni endiyidingayo ukuba ndiyazi?
Ngentlalo enkulu ekuphumeni kwintlalo, iNgilani ithathwa njengeyintandokazi edolophini yasekhaya, kunye neHong Kong, kunye neTshayina ekhangayo ukufumana i-boos kunye ne-cheers edibeneyo.
Mhlawumbi ngenxa yemali yeBrits ekhona, bobabini i-Australia kunye ne-New Zealand bathambekele ekufumaneni ekupheleni kokufunyanwa kwe-booing. Iintlanga ezincinci ezifana neFiji neSamoa zithandwa ngabantu, ngelixa i-underdogs eCanada nase-USA nazo zamukelwa kakuhle. Enye into onokuyenza ngayo ibhanki, i-loudest boo ihlale igcinwe kwiFrentshi.
Iimpawu zeSenzhen: Kukuphi ukuthenga eHong Kong
Iintlanzi ezili-10 zaseHong Kong
Imbali yeHong Kong Timeline - ukusuka eMa kuze kube ngoku
Ukutya kwesitalato saseHong Kong: i-Dai Pai Dongs
I-Hong Kong Symphony ye-Light Show
Amabala e-Romantic eSan Antonio
I-Ice Skating Rinks e Seattle naseTacoma
Indlela Yokugcina Imali e-Iceland
Ukunyuka kwezoKhenketho lwezoNyango ePuerto Rico
IHartwood Acres Park kufuphi nePittsburgh
Indlela yokucebisa iNtombikazi yeehotele
Imozulu eFransi - Imozulu kunye neNtsumpa yamadolophu aseFransi
5 IiRhafu zokuHlaba ukutya
Iziqithi ze-Exotic zaseTahiti, Kwaziwa kwakhona (kwaye zithandwa) njengeFrench Polynesia
Ezi zeMihlaba zeeLwandle eziMhlaba zeeNkxaso zeeNkcukacha zeeNkcukacha zeeNkcukacha zeeNkcukacha zeHlabathi
Ukutya kweNdabuko ukuzama kwi-Yurophu yaseMpuma
Kuphi ukutya kwiSan Diego: North Park
I-Celestyal Crystal Profile
Izizathu ezi-10 zeMindeni ukuhamba nge-Anthem yeeLwandle